peer-to-peer ချေးငွေပလက်ဖောင်းတွေကဘာတွေလဲ။ | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
ဟိုဆေး recio | | ချေးငွေများ, ဘဏ္productsာရေးထုတ်ကုန်များ
အကယ်၍ သင်သည်အကြွေးဝယ်လိုင်းကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၊ ယခုအချိန်တွင်သင်သိထားသင့်သောအချက်မှာ၊ ဘဏ်ချေးငွေများ ပိုမိုရိုးရာ ဘယ်လိုလဲ? တစ် ဦး ချင်းစီအကြားချေးငွေပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါဟာနည်းလမ်းတစ်ခုပါ အခြားရွေးချယ်စရာငွေကြေး ဒါကသင့်ကိုအခက်အခဲတစ်ခုထက်မကမှလွတ်မြောက်စေနိူင်သည်။ ထို့အပြင် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာများစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောအတိုးနှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စစ်ဆင်ရေး၏တရားဝင်တွင်သင်ငွေစုဆောင်းလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူများကြားတွင်ထူးခြားသောလူကြိုက်များမှုနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသောပုံစံသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်, အကြား အငယ်လူ ဦး ရေ၏ကဏ္ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအတွက်ကိရိယာအသစ်တွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့သုံးတယ်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီအားသင်၏အနီးဆုံးလိုအပ်ချက်အချို့ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ခွင့်ပြုပေးသည့်ပလက်ဖောင်းအသစ်များ၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူ။ သင်တန်း၏၎င်း၏စက်ပြင်ပိုမိုရိုးရာစနစ်များမှတဆင့်ကဲ့သို့တူညီသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်။
တစ် ဦး ချင်းစီအကြားချေးငွေပလက်ဖောင်းများသည်သင်ယခုသိထားရန်လိုအပ်သည့်ပုံမှန်ကွဲပြားသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးသည်။ သုံးစွဲသူအဖြစ်တင်ပြသည့်ပရိုဖိုင်းပေါ် မူတည်၍ သင်တန်ဖိုးထားနိုင်လျှင်သို့မဟုတ်တရားစွဲနိုင်သည်ဆိုလျှင်တန်ဖိုးကိုရည်ရွယ်သည်။ သူ၏အရေးအပါဆုံးပံ့ပိုးမှုနောက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အဘယ်အချိန်၌ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည် သူတို့ကသင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီ ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အဆိုပြုချက်ကိုမှတဆင့်။ ချေးငွေတောင်းခံရန်သင့်တွင်ဤအရင်းအမြစ်အမြဲရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့ပေးသောပမာဏသည်သမားရိုးကျပမာဏများထက်နည်းသော်လည်း၊
1 တစ် ဦး ချင်းစီအကြားပလက်ဖောင်း
5 P2P ချေးငွေကဘာလဲ?
တစ် ဦး ချင်းစီအကြားပလက်ဖောင်း
ဤပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အားဘာကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်သိရခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဤအထူးငွေကြေးကိရိယာများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးမျှော်လင့်ချက်များကိုဆောင်ရွက်လိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ခံမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်ချေးငွေပလက်ဖောင်းများစွာဖြစ်သည်။ လေ့ P2P ကိုခေါ်ချေးငွေလိုအပ်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အမှန်တကယ်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အချို့သောလိုအပ်ချက်များကိုကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဖြင့်သာလိုချင်သော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားလုံးထက် ပို၍ လိုချင်ကြသည်။ အလွန်ကောင်းစွာဘဏ်များကိုအစားထိုးသောဤအသစ်သော tools များသတ်မှတ်ကြောင်းဝိသေသလက္ခဏာများတစ်စီးရီးနှင့်အတူ။
ဤသည်ထုတ်ကုန်အသစ်ကြောင့်အားလုံးအထက်တွင်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် မျှော်မှန်းနှုန်းသည်တစ်နှစ်လျှင် ၇% နီးပါးရှိသည်ဥရောပဘဏ်များကမ်းလှမ်းထားသည့်အမြတ်များထက်များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့် ၄% အဆင့်သို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤအလွန်အထူးပလက်ဖောင်းများ၏ဘုံပိုင်းခြေအခြားတစ်ခုဖြစ်သည်ငွေဖြစ်လွယ်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်မိမိ၏အစုစုကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရောင်းချနိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသူ၏ငွေကိုရယူနိုင်သည့်နေရာမှစတင်သည်။ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကိုတောင်းခံ။ သူ၏ဘဏ်စာရင်းသို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏ရှုပ်ထွေးမှုအနည်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီအကြားဤချေးငွေပလက်ဖောင်းများတွင်လုပ်ကိုင်ရန်, ဤအချိန်တွင်တောင်းဆိုထားသည်ဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ချက်များစွာရှိသည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အကယ်၍ ဒီဘဏ္toolsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာအသစ်တွေကိုတစ်စုံတစ်ခုကခွဲခြားသိမြင်ထားရင်အဲဒါကိုသူတို့သုံးရတာအရမ်းလွယ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်။ သင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်အတန့်မှစတင်လည်ပတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ယင်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်အသိပညာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိခြင်းနေသော်လည်း။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လည်ပတ်သည့်အခါနှင့်ထိုတိကျသောအချိန်များမှသင်သွားမည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသံသယများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တစ် ဦး ချင်းစီအကြားချေးငွေပလက်ဖောင်းများတွင်သင်သည်သင်၏အစုစုကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်ကိုမေ့လျော့တော်မနိုင်။ ဥပမာ။ သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုသူသင်၏အစ်ကိုနှင့်အတူ။ အခြားအကြောင်းပြချက်များအကြား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကအဲဒါကိုရိုးရိုးလေးလုပ်နိုင်တယ် သင်တို့နှစ် ဦး စလုံးအားသာချက်များစွာရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ပိုကောင်းတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခြေအနေများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အနေအထားဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာရန်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အကျိုးစီးပွားကိုအဘယ်ကြောင့်ရရှိမည်နည်း။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါက၎င်းသည်သင့်အားငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှရောင်းချသောချေးငွေတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခြင်းထက်သင့်အတွက်ငွေနည်းပါလိမ့်မည်။ ဒါကယခုမှစ။ မည်မျှရိုးရှင်းပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်အခုစဉ်းစားမည့်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာတစ် ဦး ချင်းစီအကြားရှိချေးငွေပလက်ဖောင်းများမှပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့်အန္တရာယ်များဖြစ်သည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရစွန့်စားမှုများသည်အလွန်ကန့်သတ်ချက်ရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည်၊ ဒီထူးခြားတဲ့စီးပွားဖြစ်မဟာဗျူဟာ၏အကျိုးဆက်အဖြစ် အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချလိမ့်မည် အချိန်တိုင်းသင်သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုကိုတောင်းဆိုသည်။ အခြားပါတီနှင့်သင်သဘောတူသောစိတ်ဝင်စားမှုအပြင်ပုဂ္ဂလိကငွေချေးသူနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
ထို့အပြင်ဤပလက်ဖောင်း ၎င်းတို့သည်စစ်ထုတ်စက်များကို အသုံးပြု၍ အမှားများသည်လက်တွေ့အားဖြင့်သုညဖြစ်သည် သို့မဟုတ်မရှိခြင်း။ ဤနည်းအားဖြင့်လာမည့်သီတင်းပတ်များအတွင်းသင့်အားအံ့သြစရာတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည့်မလိုချင်သောအဆက်အသွယ်များကိုရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်အန္တရာယ်များကိုသေချာစွာထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းသံသယမရှိပါ။ ပြီးတော့ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုကူညီရာရောက်တယ်၊ ဒါကသင့်ကိုယ်ပိုင်ကိစ္စပဲ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ဖြစ်စေ၊ နားလည်ရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သကဲ့သို့၊ အရာအားလုံးသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအကြားချေးငွေပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီ၏ချမှတ်ထားသောအခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအတူတူမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအကြားဖြန့်ဖြူးရာတွင်အလွန်ပြောင်းလဲမှုမရှိသောအလွန်တသားတည်းဖြစ်သောကဏ္ sector တစ်ခုဖြစ်သည်။
စွန့်စားမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်သင်၏အစုစုအတွင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားရန်အရေးကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဥများအားလုံးကိုခြင်းတောင်းထဲ၌ထည့်မထားသင့်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်မှချေးငွေအမျိုးမျိုးမှတဆင့်မျိုးစုံရမည်ဖြစ်သည် အရှုံးသင့်ရဲ့အလုံးစုံအန္တရာယ်လျှော့ချ။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ဤပလက်ဖောင်းများသည်ဤထူးခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောနှစ်ပိုင်းစလုံးတွင်အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင်မမေ့သင့်သောအရာဖြစ်သည်၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ယခုအချိန်မှစ၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာအသုံးပြုသူပလက်ဖောင်းများသည်ယခင်လများကကဲ့သို့ပင် API မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့ရှေ့မှာရှိသည်။ အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ အနည်းငယ်ကျဆင်းသွား ၀.၄% သို့ ဒီ option အတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်စုစုပေါင်း၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၎င်းသည်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစားထိုးများထက်ရှင်းလင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိနေသော်လည်းဤမော်ဒယ်များတစ် ဦး ချင်းစီအကြားပါဝငျ
ဤရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအားသာချက်ကိုအသုံးမပြုနိုင်သောသူများအတွက်ဤအချိန်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ P2P ချေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာတွေသိဖို့လိုသလဲ။ သို့မဟုတ် P2P ချေးငွေများကမည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေ နှင့်အင်တာနက်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီမှုကသူတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုဗဟိုပြုရည်မှန်းချက်များကိုအလွန်အစွမ်းထက်သောအမှန်တရားအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံး P2P ပလက်ဖောင်းများတွင်၊ သင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းတစ်လုံးသုံးနေသည်ဖြစ်စေပေါ် မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်စတင်ပါ ၀ င်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်နှင့်ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်နိုင်သည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်၎င်း၏ပါ ၀ င်မှုများကိုနေ့အချိန်၊ ည၊ မည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံး၌မဆိုဤစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတရားဝင်စရာမလိုဘဲ။ ဒါကြောင့်ဒီလမ်းအတွက်, သင်သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအကြားချေးငွေပလက်ဖောင်းများမှမြှင့်တင်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်သင်သည်ချေးငွေမျဉ်းကိုတောင်းခံနိုင်သည့်အထိဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ငွေကြေးကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မည့်သူသည်မည်သူဖြစ်မည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်မှာအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင်ပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်အနေဖြင့်ကြိုတင်မြင်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုသည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်နောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသောအထူးထုတ်ကုန်များကိုသတ်မှတ်ထားသောနောက်ဆုံးရက်များဖြစ်သည်။ ဤယေဘူယျမြင်ကွင်းမှကြည့်လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းများကပေးသောချေးငွေများမှာအမှန်ပင် ၆ လမှ ၁၈ လအထိစည်းကမ်းချက်များရှိသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုအချိန်ကာလကိုအပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတိပြုရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းမှာရင့်ကျက်မှုပိုနည်းတာပေါ့။
ထို့အပြင်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းစျေးကွက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခကြေးငွေမရှိပါ။ သေးငယ်သည့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခကြေးငွေကိုဆိုးသွမ်းသောချေးငွေများ၏စီးဆင်းမှုမှနှုတ်ယူသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည့်ပြည်တွင်းအလယ်အလတ်စျေးကွက်ကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ပင်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်သောရာနှင့်ချီသောဒေတာအချက်များကိုသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်မှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။ ရိုးရာဘဏ္financialာရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်ပတ်သက်။ အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုယခုမှငှားရန်သင့်အားဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » ဘဏ္productsာရေးထုတ်ကုန်များ » peer-to-peer ချေးငွေပလက်ဖောင်းများကဘာတွေလဲ။
ဂျိုင်းရို ဂျရိုနီမို ဟုသူကပြောသည်
jairo jeronimo အားပြန်ကြားပါ
ထွန်းသစ်စစျေးကွက်များ - အဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်